Apple waxay soo bandhigi kartaa afhayeen cusub oo leh Siri $ 250 iyada oo loo marayo Beats | Wararka IPhone
Isniinta soo socota waa shir sanadle ah oo loogu talagalay horumariyeyaasha, kaas oo Apple ay ku dhawaaqi doonto qaar ka mid ah sheekooyinka waaweyn ee gaari doona nidaamyadooda hawlgalka laga bilaabo Sebtember. Laakiin sidoo kale, inkasta oo aysan ahayn wax caadi ah, waxay u badan tahay in ragga ka socda Cupertino ay na tusi doonaan qalab kale oo qalab ah, sidoo kale gebi ahaanba cusub ama dayactir kuwii hore.
Dhowr maalmood ka hor, waxaan ka dhawaajinay warar xan ah oo sheegaya in Apple ay soo bandhigi karto afhayeen cusub oo hoos yimaada magaca Beats, iyada oo aan lahayn Siri iyo qiimo dhan 200 oo doolar. Hadda waa falanqeeye sheeganaya wax la mid ah. Gene Muster wuxuu sheeganayaa in Apple ay ku soo bandhigi karto WWDC, afhayeen cusub oo leh Siri oo lagu dhex daray magaca Beats taasina waxay lahaan doontaa qiimo dhan 250 doolar.
Sida uu qabo falanqeeyahaan
Qiimaha HomePod wuxuu udhaxeeyaa 2 iyo 3 jeer qiimaha qofkasta oo caqli badan oo hada ku hadla suuqa. Waxaan u maleyneynaa in Apple ay horumarin karto himilooyinkeeda suuqan iyada oo la bilaabayo afhayeen caan ku ah Beats oo ah $ 250, qiime ka fog $ 349 ee HomePod, marka aragti ahaan afhayeenkan cusub waa inuusan ka badbadin.
In kasta oo waxa falanqeeyahaani sheegayo, haddii Apple ay soo saarto hadal ka raqiisan HomePod, laakiin $ 100 ka jaban, haddana waxay u badan tahay inay dadku doortaan qaabkan cusub, oo ah nooc haddii uu Apple doonayo inuu wax qabto, sidoo kale. waxay la jaan qaadi doontaa tikniyoolajiyadda AirPlay 2, tiknoolajiyad horeyba loo heli jiray ka dib markii la sii daayay nooca ugu dambeeya ee iOS 11.4, tiknoolajiyad sidoo kale noo ogolaaneysa inaan labo qalab isbarbar dhigno si aan ugu raaxeysanno codka isteeriyaha isla qolka.
Laga soo bilaabo Actualidad iPhone, waxaan sameyneynaa a Dabagalka gaarka ah ee WWDCSida sanad kasta iyada oo loo marayo Twitter, marka lagu daro inaan kuu soo bandhigo dabagal toos ah adoo u maraya qaybta Tooska ah ee aan awood u siin doonno maalmo yar si aad isu diiwaangeliso oo aad u hesho daqiiqado ogeysiis ah ka hor intaadan bilaabin.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Alaabada Apple » Apple waxay soo bandhigi kartaa afhayeen cusub oo leh Siri $ 250 iyada oo loo marayo Beats